#JusticeforJisha (Ny rariny ho an’i Jisha): Manohitra Ny Fanolanana Sy Ny Famonoana Ilay Dalit Vehivavy i India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Mey 2016 5:20 GMT
Diabem-pitakiana #JusticeforJisha. Sary tao amin'ny pejy Facebookn'i Biju Ibrahim
Niteraka hatairana goavana manerana an'i India ny fanolanana sy famonoana feno habibiana an'ilay Dalit mpianatra lalàna 30 taona tamin'ny 28 Aprily tao amin'ny kaominina Perumbavoor ao Kerala, atsimon'i India. Nanamafy ny fandidiam-paty natao tamin'ny niharam-boina, izay nomena anarana fotsiny hoe Jisha tao amin'ny haino aman-jery fa voaolana izy ary voatsindrona antsy in-38, anisan'izany ny ratra lalina roa teo amin'ny tratrany, ary noesorina tao anatin'ny vatany ny tsinainy.
Mampahatsiahy ny herisetra fanolanana nataona andian-jiolahy tao Delhi Atsimo izay nanohina ny firenena tamin'ny Desambra 2012 ity faharatsian-toetra ity. Naolana, nodarohana sy nampijaliana tao anaty fiara fitateram-bahoaka i Jyoti Singh, 23 taona, ary avy eo natsipy teny amin'ny arabe, sady niboridana no boba rà. Namoy ny ainy noho ny ratra tsy zaka i Singh, izay notondroina ho Nirbhaya, na ilay “tsy matahotra” tao ao amin'ny haino aman-jery.
Enina andro taorian'ny famonoana an'i Jisha, tsy nahavita nisambotra olona ny polisim-panjakan'i ​​Kerala hatramin'izao. Nanjary lasa fitaovana politika avy hatrany ny raharaha, manome tsiny ny fitondram-panjakana tantanin'ny Manda Demokratika Mitambatra noho ny tsy fisian'ny fivoaran-draharaha ny antokon'ny mpanohitra, CPI (M) ao Kerala . Fantatra fa hotontosaina amin'ny 16 Mey ny fifidianana ao amin'ny antenimiera, ary nisahana manokana ny zava-nitranga ny Vaomieram-pirenena misahana ny Zon'Olombelona. Nisambotra olona ahiahiana avy ao an-tanànan'i Kannur ny polisy, saingy tsy nifanaraka tamin'izay nangonin'ny polisy teny amin'ny sehatra nisian'ilay heloka bevava ny dian-tanany.
Hita taratra ny hatezeram-bahoaka hatramin'ny niparitahan'ny tatitra nisian'ny zava-nitranga mahatsiravina tamin'ny fampahalalam-baovao isan-karazany. Maro ireo nandray anjara tamin'ny diabem-panoherana nokarakaraina tamin'ny faritra maro tao Kerala. Nitambatra ny mpikatroka sy ny mpianatra haneho fahatezerana sy tsy fahafalian'izy ireo manoloana ny toe-javatra mampalahelo mikasika ny fiarovana sy ny zon’ ny vehivavy ao India.
Nanoratra tao amin'ny Kafila, bilaogy mitsikera ny politika sy ny fampitam-baovao i Shehla Rashid:
Tsy mba hahazo rariny ianao satria mailaka loatra hanome tsiny ny fanolanana amin'ny zavatra rehetra, fa tsy ny tena antony. Vonona izahay hanome tsiny ny fanolanana amin'ny fitafiana sy ny safidin'ny vehivavy, ny fahantrana, ny toaka, ny (paty) chowmein, ny finday sy ny zavatra hafa tsy mitombina, fa tsy amin'ny fanjakazakan'ny lehilahy, ny feodalisma, ny famarotana vehivavy ataon'ny kapitalisma, eo amin'ny saranga, eo amin'ny fiarahamonintsika.
Voampanga ho tsy manome fanangonam-baovao ampy na sehatra an-gazety ho an'i Jisha ny haino aman-jery mahazatra. Ny sasany aza nihevitra fa misy ifandraisany amin'ny hantsana eo amin'ny tanàndehibe sy ambanivohitra ary eo ihany koa ny fanavakavahana ara-tsaranga, fa natokana ho an'ny tanàndehibe sy ny mponina ambony saranga ny alahelo sy ny fisaonam-pirenena .
Ny fanolanana feno herisetra ao New Delhi sy Mumbai ihany no mendrika hisarihana ny sain'ny firenena @TimesNow sa tsy izany? Tsy mendrika kosa ny tao Perumbavoor, Jharkhand Chattisgarh sns!!!
Tsy misy diabem-piraisankina, tsy misy labozia, tsy misy diabem-pihetsiketsehana, tsy misy mpaka ny vata mangatsiakan'ny Dalit
Ho an'ny olona manontany ny antony mahatonga ny #JusticeforJisah tsy nivoaka tamin'ny lohatenim-baovao tahaka ny tamin'i Nirbhaya- Satria vehivavy Dalit izy
Midika hoe “nampahoriana” ny Dalit ary anarana ara-politika nosafidiana ho an'ny saranga nosokajiana ara-tantara ho “tsy azo kitihana” ao anatin'ny rafi-tsaranga Haindò. Mijanona ho fisehoan-javatra mahazatra ny fanavakavahana atao amin'ireo Dalits, izay voaràran'ny lalàna Indiana, niakatra 245% ny heloka nihatra tamin'ny Dalits tao anatin'ny 10 taona.
“Aza mandry am-piadanana, Manangara anay, dory izahay, Ao anatin'ny henatra”
Feno fitakiana #JusticeforJisha ny haino aman-jery sosialy. Vondrona Facebook 34 no natokana ho an'ny hetsika manomboka izao, ary nalaza tao amin'ny Facebook izany diezy izany. Na dia tsy nalaza tao amin'ny Twitter aza izany, feno sioka misarika ny saina mikasika ny hetsika ny sehatra.
Na dia 5 andro taoriana aza, toa tsy manan-kevitra ny polisy… fa nahoana? Tsy liana amin'ny famahana ny raharaha? Tsy dia zava-dehibe loatra?
Na iza na iza ny anaranao,
Aza mandry am-piadanana,
Ao anatin'ny henatra.#jisha #JusticeForJisha #Kerala #shame
Tadiavo ny meloka. Atsaharo ny toe-tsaina manome tsiny ny niharam-boina. Atsaharo ny famelomana ny kolontsaim-panolanana.
Mijoro ho an'ny zon'ny Dalit sy ho an'ny zon'ny vehivavy ao amin'ity firenena ity i Jisha. Mila fongorina ny fanjakazakan'ny lehilahy. Homamiadana izany, tahaka izany ihany koa ny firazanana.
Nanoratra tononkalo ho an'i Jisha ilay bilaogera ao amin'ny Cloud Nine:
Diabe Labozia, fiaretan-tory mangina
Fampisehoan'ny media ary andro vitsy mialoha
Nahazo endrika vaovao ny zanaka vavin'i India.
Raràna ny fanadihadiana, ahantony ny foto-pinoana
Afaho ny hatanorana, ovay ny lalàna
Tsy manova na izaho na ianao izany.
Tsy tranga miavaka ny famonoana an'i Jisha, fa nilaza ireo olana marobe ihany koa ny fanehoan-kevitra tao amin'ny haino aman-jery sosialy, anisan'izany ny fanjakazakan'ny lehilahy, ny fironana amin'ny lehilahy, ny tsy firaikan'ny polisy, ny kolontsaim-panolanana, ny fanomezan-tsiny ny niharam-boina, ny zon'ny Dalit zo sy ny zon'ny vehivavy. Antenaina fa ho tafaraka ny sehatra rehetra eo amin'ny fiarahamonina Indiana, ka misy fiafarany ny tsy rariny ary tsy hiharitra herisetra sy fijaliana tahaka izany intsony ny vehivavy tahaka an'i Jisha sy Nirbhaya.